Akhriso Shabaabul Mujaahidiin Oo Burburiyay Shirkad Ay Leedahay Dowlada Kenya. – Calamada.com
Akhriso Shabaabul Mujaahidiin Oo Burburiyay Shirkad Ay Leedahay Dowlada Kenya.
Wararka naga soo gaaraya gobolka Lamu ayaa sheegaya in ciidamada Mujaahidiinta ee ka howgala gobolkaas ay burburiyeen xarun ay gobolka ku leedahay shirkad korontada bixisa oo hoostaga dowladda saliibiyada Kenya.
Howlgalkan oo ahaa mid qorsheysan ayey Mujaahidiintu ku burburiyeen taawarkii shirkaddaas oo ka taagnaa xarunta ay ku leeyihiin deegaanka Malihooy oo u dhexeeya magaalooyinka Hindi iyo Witu ee gobolka Lamu.
Mujaahidiinta ayaa markii ay howlgalka fuliyeen si nabadgalyo ah kaga soo baxay deegaanka iyagoo aanan wax iska caabin ah kala kulmin ciidamada Kuffaarta Kenya.
Taawarka la burburiyey ayaa ahaa mid aad u weyn oo adeegga korontada siin jiray gobolka Lamu iyo gobolada kale ee ku xeeran.
Markii la burburiyey waxay korontadu ka go’day qeybo ka mid ah gobolada Lamu iyo Tanariiva, iyadoona ilaa hadda aanay dowladda hoose u suuragalin in dib loo soo celiyo adeeggii korontada.
Ciidamada Mujaahidiinta ee ka howlgala gobolka Lamu ayaa dhowrjeer sidan oo kale howlgalo lagu beegsanayo xarumaha korontada ee gobolka Lamu ka fuliyey halkaasi, iyagoona ku guuleystay in ay burburiyeen shirkado dhowr ah oo qaarkood aanay ilaa hadda u suuragalin in ay dib u soo celiyaan adeegyadii koronto ee ay bixin jireen.
Xigasho Idaacadda Islaamiga Andalus.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo.10-01-1440 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 10-01-1440 Hijri.